Ngaba uye waya kwindawo yokuzalwa yeNkosi uBuddha?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeNepal Breaking » Ngaba uye waya kwindawo yokuzalwa yeNkosi uBuddha?
Iindaba zeNepal Breaking • iindaba • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
by UScott Mac Lennan
Ibhalwe ngu UScott Mac Lennan
INepal yindawo yokuzalwa yeNkosi uBuddha.
Ithempeli likaMaya Devi eLumbini liyakwamkela iindwendwe kwakhona xa isoyikiso se-COVID-19 sisemva.
eTurboNews Kuluhlu lwethu oluqhubekayo lweempawu zokuya kwindawo ekhumbuza umhlaba malunga nezokhenketho ezinokubakho kungekudala.
INepal idume ngokunyuka kweentaba kunye nokuhamba, kodwa kumhambi ongenamdla kuninzi ngobuhle, izilwanyana zasendle kunye nokuvuka ngokomoya okulindeleyo. U-Lumbini ngumzekelo wokugqibela woku.
Kodwa yazi, esi sisiza esinamandla ngokwasemoyeni kangangokuba umlawuli omkhulu wayiyeka imfazwe kwaye waphila ubomi boxolo; U-Lumbini unamandla okutshintsha.
ILumbini yindawo yeLifa leMveli le-UNESCO. Kukho amandla okanye i-aura eya eLumbini engacacanga.
Umlawuli u-Ashoka wamisa into ekucingelwa ukuba yeyokuqala kwi "ntsika ze-Ashoka" apha kwindawo yokuzalwa ka-Buddha. Ulawulo luka-Ashoka (malunga no-304-233 BC) luyamangalisa ngenxa yokuba lo Kumkani wayeyimfazwe wobukhosi baseMauryan ngequbuliso waguqukela kubuBuddha, wayilahla imfazwe, kwaye wanikezela iminyaka yokugqibela yobomi bakhe ekufundiseni uxolo kunye neendlela zikaBuddha.
Ithempeli likaMaya Devi eLumbini lisengumbandela wokugrumba kwaye iarcheologists ziyaqhubeka nokwenza izinto ezintsha nezibalulekileyo malunga nesiza. Ecaleni kwetheyibhile yangoku, iNtsika ka-Ashoka edumileyo imi kunye nombhalo ochaza le ndawo njengendawo awazalelwa kuyo uBuddha.
Ngo-2014 kwabhengezwa, izicwangciso zaseNepal zokuphuhlisa iLumbini, ekudala ichongiwe njengendawo yokuzalwa kweNkosi uBuddha, njengesiXeko soXolo seHlabathi.
Uninzi luthi ngaphandle kwemizamo eyahlukeneyo yokuguqula iLumbini njenge "Mecca yamaBuddha", le ndawo isatyeshelwe kwaye ifuna iibhiliyoni zeedola kutyalo mali.
Iingcali ezininzi zikholelwa ukuba ukufunyanwa kunokusombulula impikiswano ngomhla wokuzalwa kukaSiddhartha Gautama, owaba nguBuddha.
Namhlanje uLumbini ubamba iitempile ezininzi kunye neemonki ezakhiwe ngamazwe aliqela ahlukeneyo. Kuphawuleka phakathi kwabo yiRoyal Thai Buddhist Monastery, iZhong Hua Chinese Buddhist Monastery. I-Monasteri yaseCambodia, iPagoda yoXolo lweHlabathi, kunye nesacholo, Itempile kaMaya Devi. Kulula ukunqumla i-boulevard ende kwaye ubatyelele bonke. Kukho imyuziyam esizeni kunye namawakawaka ezinto eziye zavulwa zajikeleza indawo yeTempile kaMaya Devi.
Ejikelezwe yimbali kunye nokubaluleka kwenkolo yaseLumbini kunokuba ngamava okuphelisa ukunxanelwa ngokomoya, ke Qiniseka ukuba uzinika ixesha elaneleyo lokukuvumela ukuba kungene konke.
ULumbinī ngumBhuda indawo yokundwendwela kwiSithili saseRupandehi kwiPhondo laseLumbini eNepal. Yindawo apho, ngokwesiko lamaBuddha, uKumkanikazi uMahamayadevi wazala uSiddhartha Gautama malunga ne-563 BCE
Ufikelela njani eLumbini?
Ngomoya uthathe uhambo lwemizuzu engama-30 ukuya eSiddharthanagar kunye nokuhamba ngeekhilomitha ezingama-28 ukusuka apho.
Ibhasi. Ukuma iiyure ezili-10 ukuya ku-11 zokutya endleleni
Imoto yabucala iiyure eziyi-7-8
Ukuthatha indlela ngeHetauda kunika ithuba lokundwendwela iBarsa Wildlife Reserve, eChitwan, okanye zombini xa usendleleni ngelixa uhamba ngePokhara unika ithuba lokuma eBandipur idolophu entle ethe tyaba kwintaba yaseNewar, emva koko ePokhara utyelele iPhewa Ichibi, jonga i-Annapurna massif. Ukuba unexesha kwaye ufuna ukubona ubuninzi beentlobo zobume bendawo kunye neendawo ezintle eNepal, qesha imoto yabucala kwaye wenze uhambo lokuhamba kwaye ufumane konke kuhambo olunye.
Kanye eLumbini kukho iihotele ezininzi ezintle ezibonelela uluhlu olubanzi lwamaxabiso kunye neenkonzo. Kuyacetyiswa ukuba ubhukishe kwangaphambi kwayo nayiphi na kunye nendawo yakho ekucetywe kuyo kuhambo.
INepal inyuselwa njenge Umthombo wobuBuddha.
Umbhali / umfoti wathabatha uhambo "lweluphu" ngesithuthi sabucala kwi2015.
UScott Mac Lennan
UScott MacLennan uyintatheli yeefoto eNepal.
Umsebenzi wam ubonakele kwezi webhusayithi zilandelayo okanye kupapasho oluprintiweyo olunxulumene nezi webhusayithi. Ndinamava angaphezulu kweminyaka engama-40 yokufota, ifilimu kunye nemveliso yeaudiyo.
Isitudiyo sam eNepal, iiFilimu zeFama yakhe, sesona studio sikulungeleyo kwaye sinokuvelisa izinto ozifunayo kwimifanekiso, iividiyo, kunye neefayile eziviwayo kunye nabasebenzi bonke beeFilimu zeFama yakhe ngabasetyhini endabaqeqeshayo.
Ukuqaliswa kwe-IMEX yaseMelika: Amandla amatsha kunye noBumbano
Isiphithiphithi sangoLwesihlanu omnyama eLondon njengoko abaqhubi beTube bebetha
Iisirinji zesitofu sokugonya se-COVID ngoku ziSetyenziswa Phantsi: Inokuba Sengozini...
Indiza entsha esuka eDoha isiya eTashkent kwiQatar Airways
IMoscow Red Square ivaliwe emva kodonga lwaseKremlin ...
Entsha Heyi! I-Kafe iyachuma eIndiya
USihlalo weeSandals® Resorts onguSihlalo uqondwa njengeLizwe ...
IBrits ithi okusingqongileyo kunye nozinzo kubalulekile...
I-New Djibouti Sheraton ekhuphisana neKempinski kunye ...
Iinqwelomoya zaseHawaii zihambela eTom Bradley International ...
Ukuhamba okukhuselekileyo kwe-COVID kulindeleke ukuba kuqhubele phambili amafutha kuhambo lwemoto
IGunya lezoKhenketho laseMalta kuMntla Melika ngoku liphumelele i-3 egqwesileyo...
Ingxelo yaseNorton: Itekhnoloji yenkxaso yobuchwephesha ziNombolo 1 ...
Inkukhu Burgers ngu Longo Ngoku Uyakhumbula
Owayesakuba ngumphathi we-GE ogama lingu-CEO we-Unical Aviation
Izikhokelo ezitsha zeCDC kubantu baseMelika kwi-Omicron Covid...
Abakhenkethi baseRussia babanjelwe eTurkey ukuqala ...
I-Princess Cruises isika i-Australia kunye neNtsha ...
I-Afrika kulapho impucuko kunye nosuku lokhenketho lwehlabathi ...
Iindiza ezintsha zeRoll-Royce zoMbane zoMbane zoMbane ziThatha ...
Ifashoni yeHlabathi: Indima yeTaiwan neSri Lanka kwi ...
Ishedyuli entsha yenqwelomoya yeeNqwelomoya zaseMzantsi Afrika: Iinguqu...
Umongameli waseTanzania: Inye yeqela lokhenketho e ...
Umsebenzi omtsha wokukhusela uMhlaba uqaliswe yiNASA kunye ne-SpaceX
Inyikima Yomhlaba Enamandla ebhalwe nje kwisiqithi ...
Indiza entsha yaseCalgary eya eSeattle indiza eWestJet ngoku
Izivumelwano zezabelo zabucala ziqhuba uhambo lwehlabathi kunye nokhenketho...
I-Boeing ichaza uSekela Mongameli omtsha kaRhulumente ...
I-Uganda Hydro Dams: Ukufikelela kuKhenketho olutsha
INew Boeing 737 MAX yeWhite Whitewash: iBoeing ...
Kufuphi kwi-1 yezigidi zeeRobhothi ngoku kwiiFactory zaseTshayina
Ukwabelana ngesondo simahla kunye noKhenketho lweSixeko
Iihotele zaseHawaii zilungiselela ngaphezulu kwe- $ 1 yezigidigidi kwilahleko
Ukubuya kohambo lomoya eYurophu kuyasilela
Indima ye-United States kwi-UNWTO Entsha?
I-Southwest Airlines isungula uphando kwi-Biden-isithuko...
Iiwayini – Chenin Blanc Isilumkiso: Ukusuka Yummy ukuya Yucky
Ubuso bakho siSazisi sakho esitsha sokuHamba: I-Biometrics ilungile!
UMlawuli-Jikelele we-WHO uthetha ngeMpilo kunye nezeMali kwi-G20...
Ukuya e-US? Amanyathelo omda we-COVID ahlala ekhona...
Iqela lebhombu le-NYPD libambe indawo ejikeleze isakhiwo se-UN ngaphezulu ...
INetherlands ingena kutshixo olutsha
Amazwe angama-33 abhengeza ukuvalwa kokuhamba okutsha kunye nezithintelo